စက်သုံးဆီဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးထားသည့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များရှိ ပုဂ္ဂလိက စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင်များ
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အရောင်းဆိုင်ပေါင်း မှတ်ချက်
၁ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော် ၈၉ 1.Fuel Station-Napyitaw.pdf
၂ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၁၇၇ 2.Fuel Station-Yangon.pdf
၃ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၆၁၈ Fuel Station-Mandalay.pdf
၄ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၂၁၃ 4.Fuel Station-Ayerwaddy.pdf
၅ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၂၄၉ 5.Fuel Station-Bago.pdf
၆ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၁၉၇ 6.Fuel Station-Sagaing.pdf
၇ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၁၆၃ 7.Fuel Station-Magwe.pdf
၈ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၂၂ 8.Fuel Station-Tanintaryi.pdf
၉ ကချင်ပြည်နယ် ၈၉ 9.Fuel Station-Kachin.pdf
၁၀ ကယားပြည်နယ် ၁၅ 10.Fuel Station-Kayah.pdf
၁၁ ကရင်ပြည်နယ် ၄၄ 11.Fuel Station-Kayin.pdf
၁၂ ချင်းပြည်နယ် ၄ 12.Fuel Station-Chin.pdf
၁၃ မွန်ပြည်နယ် ၁၁၆ 13.Fuel Station-Mon.pdf
၁၄ ရခိုင်ပြည်နယ် ၃၆ 14.Fuel Station-Rakhine.pdf
၁၅ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ၅၄ 15.Fuel Station-Shan(e).pdf
၁၆ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ၁၈၈ 16.Fuel Station-Shan(n) 2.pdf
၁၇ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ၁၅၉ 17.Fuel Station-Shan(s).pdf
၂ ။ Regency Material Trading Co., Ltd. ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ၀၁-၆၄၅၁၀၈
၃ ။ မြတ်မေတ္တာမွန်
၄ ။ မြဝတီထရေးဒင်းလီမိတက် ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ် ၀၁-၃၈၇၁၉၆
၅ ။ Green Asia Services Co., Ltd. သီလဝါဆိပ်ကမ်း အကွက်အမှတ်(၁၇/၁၈-က)
၆ ။ Max (Myanmar) Services Co., Ltd. အကွက်အမှတ်-၁၅/၁၆ (စီ)၊ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ သန်လျင်-ကျောက်တန်းဒေသ
၇ ။ Puma Energy Asia Sun
၂ ။ Kyaw San Co., Ltd. သုပ္ပရောဓ
၃ ။ Asia Sun Trdg Co., Ltd. အမ်တီ-MEPAS
၄ ။ Khine Khine Phyo Int’l
၅ ။ Denko Trading
၇ ။ ဦးတင်ဝင်း မိဘမေတ္တာ(၁)
၁၀ ။ Shwe Myan Aung
၁၁ ။ Shwe Myan Aung
၁၂ ။ Light Face Tdg.
၁၃ ။ Light Face Tdg.
၁၄ ။ Light Face Tdg.
၁၆ ။ Yar Zar Min Industry
၁၉ ။ အင်းပေါက်ဝကုမ္ပဏီလီမိတက် MT-Big Sea
၂၀ ။ အင်းပေါက်ဝကုမ္ပဏီလီမိတက် MT-Shwe Lin Naing
၂၁ ။ Viking Marine Products
၂ ။ National Energy Puma Aviation
၆ ။ National Energy Puma Aviation
၇ ။ National Energy Puma Aviation
၁၁ ။ National Energy Puma Aviation
၁၃ ။ National Energy Puma Aviation